Indlela yokuhlola ejwayelekile ye-ASTM D5621 ichaza ukuhlolwa kwe-sonic shear ukuzinza koketshezi lwe-hydraulic kanye nama-viscosities abo ku-40 ° C no-100 ° C, ngokulandelana. Ukuze uvivinye futhi unqume ukuzinza kwe-viscosity oketshezi lwe-hydraulic ngaphansi kwe-shear, indlela yokuhlola ethembekile iyadingeka. I-ASTM D5621 yiprothokholi emisiwe yokuhlolwa kokuqina kweshear oketshezi olubacindezela besebenzisa amabutho e-shear-sonic.
Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic Shear Stability Testing of Hydraulic Fluids using ASTM D5621
I-ASTM D5621 yiprothokholi emile yokunquma ukulahleka kwe-viscosity oketshezi olubacindezela ngaphansi kwe-sonic shear. Ngakho-ke, amandla okushefa we-ultra-sonic asetshenziswa kumasampula we-hydraulic fluid ukuze kuhlolwe ukuzinza kweshear. Ilungele i-polymer equkethe uwoyela wokubacindezela kanye namafutha enjini.
Inhloso: Uketshezi lwe-Hydraulic (izithambisi ezithile), uwoyela wezinjini, uketshezi lokuhambisa izimoto, uketshezi logandaganda nolunye uketshezi lokuhambisa amandla kutholakala emandleni okugunda ngamazinga ahlukahlukene ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile, okungaholela ekushintsheni kwe-viscosity nokuncipha okulandelayo kokusebenza kahle. Ukuze kuthuthukiswe inkomba ye-viscosity ye-hydraulic fluids, ama-polymers (isb. Ama-polym polymer) ayengezwa kulolo ketshezi olubacindezela. Isivivinyo se-ASTM D5621 sihlola ushintsho lwe-viscosity kuketshezi oluqukethe i-polymer evezwe emandleni e-shear akhiqizwa nge-ultrasound, okuthiwa yi-sonic shear vibrations.
Isicelo: Kuyinjongo ye-ASTM D5621 protocol ejwayelekile ukunquma i-viscosity yesampula ngaphansi kwengcindezi ye-shear. Lokhu kuhlolwa kuhambisana noketshezi lwe-hydraulic ngoba uketshezi lwe-hydraulic njengoba uketshezi lokuhambisa amandla kutholakala ekuguleni. Ukuziphatha kwabo ngaphansi kwezimo ezithile zokugunda kumele kunqume ukuhleleka ukukhetha ikhwalithi efanelekile ye-hydraulic fluid ukuze isetshenziswe emishinini nasezinjini ezithile.
Inqubo: I-viscosity yokuqala ye-hydraulic fluid inqunywa. Isampula bese sibekwa ku-beaker yokuhlola, sithanjiswe kuthempelesha yokuhlolwa bese siphathwa nge-vibrator ye-ultra-sonic (isb., Idivayisi ye-sonic shear) yesikhathi sokuhlolwa esichaziwe. Ngemuva kwalokho, kukalwa i-viscosity yesampula esetshenzisiwe. Umbiko ubala i-viscosity yokuqala, i-viscosity yokugcina namaphesenti e-viscosity ashintsha kuma-centistokes.
Uhlelo lwe-Ultra-Sonic Shear I-UP400St (24kHz, 400W) kwe-ASTM D5621 Sonic Shear Stability of Hydraulic Fluids
Izinsiza ze-ASTM D5621 Indlela Yokuhlola Ejwayelekile yeSonic Shear Stability of Hydraulic Fluids
Ukuze kwenziwe inqubo echazwe futhi yaqiniswa kuphrothokholi ye-ASTM D5621, imishini ethile iyadingeka.
I-Ultra-Sonicator: uhlobo lwe-probe-uhlobo lwe-ultra-sonic shear elinemvamisa engaguquki nophondo lwe-ultra-sonic (olwaziwa nangokuthi iphenyo noma i-sonotrode). Idivayisi ejwayelekile ye-ultrasonic esetshenziselwa ukuhlolwa kwe-ASTM D2603 yi- I-UP400St (24kHz, 400W) nge-probe ye-ultrasonic (uphondo / i-sonotrode) i-S24d22.
Ukuze kwenziwe lula ukusebenza okufanayo nemiphumela ephindaphindwayo, kunconywa imishini elandelayo yokusiza:
Ukugeza kwamanzi / kweqhwa: Ukugeza kwamanzi okupholisa noma ukugeza kweqhwa okwaziyo ukugcina izinga lokushisa kwejackethi lika-0 ° C.
ukushisa kwenzwa njenge-PT100 (efakwe namadivayisi we-ultrasonic UP400ST)
I-Griffin 50mL beaker, Yenziwe ngengilazi ye-borosilicate.
Ukuvaleka komsindo (kuyakhetheka): Ibhokisi lokuvikela umsindo (isb., Ibhokisi lokuvikela umsindo i-SPB-L le-UP400St) ukufaka uphondo lwe-ultra-sonic ukunciphisa izinga lomsindo elikhiqizwa yidivayisi ye-sonic shear.
Ukuhlolwa kweSonic Shear ngokuvumelana ne-ASTM D6080
“Uhlelo lokuhlukaniswa kwe-viscosity lwamanzi we-hydraulic luchazwa ku-ASTM D6080. Uhlelo lokuhlukaniswa kwe-D6080 lusebenzisa i-ASTM D5621 Standard Test Method ye-Sonic Shear Stability of Hydraulic Fluid, ebizwa kamuva njenge-sonic shear test, njengesisekelo sokuchaza ibanga le-viscosity lamanzi amaningi we-hydraulic fluid (ASTM D5621). Enkambisweni ye-D5621, uwoyela oqukethe i-polymer ukhanyiswa nge-sonic oscillator imizuzu engama-40. Ukuwohloka kwe-polymer ngendlela ye-sonic kungumphumela wokwakheka kwamandla okunamandla nokuwa ngaphakathi kuketshezi, okungahle kwenzeke ngaphansi kwezimo ze-fluid cavitation. Le ndlela yokunquma ukulahleka kwe-viscosity unomphela itholakele ukuthi ikhiqize izinguquko ze-viscosity ezifana nalezo ezibonwe kuzinhlelo zokusebenza ze-vane, gear, ne-piston pump. Ukuxhumana nokusebenza kahle kwevolumu yamaphampu nakho kubikiwe. Uketshezi oluphezulu lwe-VI olukhombise ukulahleka okuncane kwe-viscosity unomphela esivivinyweni se-sonic shear kunikeze ukuthuthuka okusebenzayo kwepompo yevolumu.” (UMichael et al., 2018).
UMichael et al. (2018) futhi kutholakale ukuthi kulolu phenyo oluthile, ukuhlolwa kwe-sonic shear ngendlela ye-ASTM D5621 kuhlanganiswe kahle kakhulu ekugcineni kwezilinganiso zokuhlolwa kwe-viscosity.
Kungani iHielscher Ultra-Sonicators ye-Shear Stability Tests ngokuya nge-ASTM D5621?
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngamadivayisi we-shear we-ultrasonic asebenza kakhulu wokuhlolwa kokuqina kwe-shear ngokuya nge-ASTM D5621 ne-ASTM D2603. Ngemvamisa ehleliwe, amandla we-shear we-ultrasonic onokwethenjelwa, amadivayisi we-Hielscher ultra-sonic shear alungele ukuhlolwa kokuqina kweshear oketshezi lwe-hydraulic. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher afakwe isoftware ehlakaniphile nezilungiselelo, ezivumela ukuhlolwa okuyinkimbinkimbi ngokwamazinga we-ASTM. Imenyu ifinyeleleka kalula nge-digital touch display noma nge-remote control yesiphequluli. Ngenkathi imvamisa ilungisiwe, ebalulekile kwimiphumela enokwethenjelwa ye-sonication namazinga we-ASTM, i-amplitude ingabekwa ngqo kumthelela we-stroke oyifunayo.
Amadivayisi we-Hielscher Ultrasonics wokuhlolwa kokuqina kwe-shear ahambisana nawo womabili, amazinga we-ASTM D-5621 ne-ASTM D-2603.
Ama-Hielscher Ultrasonicators esici se-ASTM D5621 Viscosity Shear Test:
I-UP400St inemvamisa engaguquki engu-24kHz ngakho-ke ihambisana ne-ASTM D5621. Ukusetha okujwayelekile kokuhlolwa kwe-ASTM D5621 uhlelo lwe-ultra-sonic shear UP400ST nge-probe (uphondo / sonotrode) S24d22.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nezinhlelo ze-ultra-sonic shear, izinhlelo ze-ASTM D5621 namanani. Sizojabula ukuxoxa ngezidingo zakho zokuhlola ze-ASTM nawe futhi sikunikeze ngedivayisi ye-ultra-sonic shear ehlangabezana nezidingo zakho!
Izicelo ze-ASTM D5621
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-sonotrode (iphenya / izimpondo) zedivayisi ye-sonic shear UP400St, engasetshenziselwa i-ASTM D5621 Standard Test Method yeSonic Shear Stability of Hydraulic Fluids
Izakhiwo ze-viscosity ze-Hydraulic Fluids and Lubricants
Izici ezibonakalayo zezinto zokugcoba eziwuketshezi nezingaguquguquki zichazwa ngedatha, enqunywa kakhulu ngamaphrothokholi wokuhlola afanayo.
Kunemingcele emibili yokulawula okokugcoba:
Inani lokulawula: Ngokuhlolwa kwamagrikhi amasha, izinqubo zokukhiqiza nezokudiliva zingalawulwa. Ukuqapha okuqhubekayo kwamavolumu okugcwalisa uwoyela ngesikhathi sokusebenza (ukuhlola oyili abasetshenzisiwe) kuvumela isenzo esisheshayo (ushintsho lwamafutha) ngaphambi kokonakala kukawoyela kulimaza umshini (ukulahla imikhawulo).
Inani lokufaneleka: Amanani wokufaneleka alinganisa izinto zokuthambisa ukuze zisetshenziswe futhi zihambisane nemishini ethile.
Incazelo yamaLubricants nama-Hydraulic Oils
Ama-lubricants angamanzi, angasetshenziswa – ekuthembekeni kobunjalo bayo – ukuqeda ukushisa nokugqoka imfucumfucu, ukufaka izithasiselo koxhumana naye, ukudlulisa amandla, ukuvikela, kanye / noma ukusayina.
Amafutha we-Hydraulic noma ama-hydraulic fluids awuhlobo olukhulu lwamafutha noma izinto zokuthambisa (amalimu), asetshenziswa embonini njengalokho okubizwa ngamafutha ezimboni.
Amafutha we-Hydraulic uhlobo oluthile lokugcoba. Lokhu kusho ukuthi uwoyela wokubacindezela awuyona into yokuthambisa kuphela, uwoyela wokubacindezela ubuye ube yindlela amandla adluliswa ngayo kuwo wonke ama-hydraulic system. Lokhu kusho ukuthi, i-lubricant futhi ngasikhathi sinye indlela yokudlulisa amandla. Ukuze kube ugcobekile osebenzayo futhi onokwethenjelwa, uwoyela wokubacindezela kufanele akhombise izakhiwo ezahlukahlukene, eziqhathanisekayo noma ezifanayo nezinye izinto zokuthambisa. Lezi zakhiwo ezibonakalayo zifaka: ukumelana amagwebu kanye ne-degassing (ukukhishwa komoya) izakhiwo, ukuqina ngokumelene nokushiswa kwe-thermal, oxidative ne-hydrolytic, ukusebenza kwe-anti-wear, i-filterability, ikhono le-de-emulsification, ukugqwala nokuvimbela ukugqwala, kanye nezakhiwo ezithile ze-viscosity maqondana nomthelela wayo ngobukhulu befilimu.
Amafutha we-Hydraulic noma ama-hydraulic fluids ahlukaniswa abe:
Uketshezi lwe-Hydraulic olususelwa kuwoyela wamaminerali
Uketshezi lokucindezela okwenziwa
Uketshezi lwamanzi olubamba umlilo
Incazelo yama-CGS Unit Centistokes
I-viscosity ye-Kinematic ivame ukulinganiswa kuma-CGS unit centistokes (cSt), alingana neziteki ezi-0.01 (St). Izitaki (uphawu: St) nama-centiStokes (uphawu: cSt) amayunithi we-CGS. I-centistokes eyodwa (cSt) ilingana no-0.01 stokes (St). I-centiStoke eyodwa ilingana namasentimitha ayisikwele ngomzuzwana (cm2 / s–1). Isiteki esisodwa silingana ne-viscosity in poise ehlukaniswe ngobuningi betshezi ngamagremu nge-cubic centimeter (g / cm–3).